Maareeye Xoor Xoor oo ka hadlay sababta dib-u-magacaabistiisa iyo dareenkii Reer Berbera ku soo dhaweeyay | Berberanews.com
Home WARARKA Dalka Maareeye Xoor Xoor oo ka hadlay sababta dib-u-magacaabistiisa iyo dareenkii Reer Berbera...
Maareeye Xoor Xoor oo ka hadlay sababta dib-u-magacaabistiisa iyo dareenkii Reer Berbera ku soo dhaweeyay
Berbera-20-Dec-2011-(Berberanews)Maareeyihii mudada dheer maamulayay Dekedda mihiimka ah ee Magaalada Berbera Eng. Cali Xoor Xoor oo maanta Madaxweyne Siilaanyo dib ugu soo magcaabay xilkaa ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Berbera.
Magaalada berbera ayaa damaashaad isugu baxday markii ay maqleen magcaabista Eng. Cali Xoor Xoor, iyagoo sameeyay fantastiye, waxayna boqolaal gaadhi oo wata caleemo qoyan kaga hortageen magaalada Abdaal oo ka tirsan Degmada Mandheera, taas oo qiyaastii 60 km dhinaca Koonfur galbeed kaga beegan Berbera , isla markaana ku taal wadada isku xidha Berbera iyo Hargeysa.
Eng. Cali Xoor Xoor oo lagu gelbinayo boqolaal gaadhi ayaa la geeyay gurigiisa Magaalada Berbera, iyadoo ay boqolaal dadweynaha magaalada Berbera wadooyinka isugu soo baxeen markii uu soo gaadhay Magaalada.
Weriyayaal ka socday shebekadaha Araweelonews iyo Berbera news ayaa weydiiyay Eng. Cali Xoor Xoor dareenkiisa iyo sababta dib loogu soo magcaabay, wuxuuna isagoo ka jawaabaya arragtida dareenkiisa yidhi, “dareenkaygu aad ayuu u fiicanyahay, Madaxweynaha iyo wasiiraddii hawshaa (magcaabista) kasoo shaqeeyayna waan u mahad celinayaa dadka reer Berbera ee ku farxay magcaabistaydana iyo kuwa isoo dhowaynaya waan u mahad celinayaa.” Ayuu yidhi Maareeye Cali.
Mar la weydiiyay in magcaabista Maareeyaha Dekedda dib loogu soo celiyay ay tahay iydoo looga maarmi waayay maamulkii dekedda, wuxuu isagoo dhoolacadaynaya, isla markaana caleemo qoyan
iyo ubax qoorta ay u sudheen qaar ka mid ah dadka watay boqolaalka gaadhi ee kaga hortegey Abdaal yidhi, “ Maya ee laygama maarmi waayin ee waa laygartay.”
Previous articleShirkadda Dahabshiil Group oo Gaadhi ku Abaalmarisay Ciyaaryahankii Dhaliyey Goolkii Kowaad ee Tartankii Ciyaaraha Gobollada Somaliland
Gabley December 21, 2011 at 9:44 AM
Siilaanyo: soo celintaa uu soo celiyay Xoorxoor waa laba mid 1) mid waa mucaaradkaa reer Berbera ku mucaaradeen oo lagu yidhi mucaarad nimada reer berbere waxay ku joojinayaan isagoo soo celiya xoorxoor 2) waa Siilaanyoo is yidhi sida kaliya eed aad wax ku cuni kartaa waa adigoo xoorxoor wax lacuna waayo waynu wadda ognahay Xoorxoor waa ninkii lacagta waddanka baabi iyay ee dhowr iyo tobanka sano cunayay ee sidda loo cunana khibrad u leh markaa muxuu usoo wadda celin waayay raggii lacuni kiray ee udub ahaa mise xaaska siilaanyo ayaa ku aamusiinaysa mucaaradnimadda reerkii Berbera ku shiray waa cajiib!!!!!
Aliyare December 22, 2011 at 5:34 PM
waar tan oo kale waxaynu aragnay ma aha,wax nin masuul ah xil umad u hayaa toona sameeyo ma ah ee wuu bqadheedhay odaygu,maalmihii uu eryeyna dadkuu ku yare saaxinayey,haddana wuu danaystay ama waa kalaga dul guuray oo waa dhako kale.haddii se ay dhakadiisii tahay arintu waxay u eeg tahay danta guud taydaa ka roon,qawlkuna ha is……….
Aliyare December 22, 2011 at 5:44 PM
Allow yaa ku dooxoo hadana aan ku dilinoo waxaad damacsantee kale debedda ula soo baxa,wejiyada caleemaha lulaya dhamaan waa shaqaaliihii Dekedda oo is daad raacinaya iyo in yar oo u darsaday diradkii iyo duulduul ay ku qabeen cali,sida aad u aragto waa dad sawirka inay ku soo baxaan ujeedadoodu ahayd
Haddii jacayl jiro Caasimaddii Dalka ayuu ka yimi ee yaa soo gelbiyey ee la socday.
Aliyare December 22, 2011 at 5:56 PM
Cali wuxuu yidhi waxaan u mahad celinayaa Wasiiradii ka hawl galay soo celintayda,Wasiiradaas cidna waydiin mayno ee waxaynu ka dhex arki doonaa Dekedda dakhligeeda iyo hawl wadeenadeeda,waayo sababta ay u hawl haleen baa ah wax la siiyo oo hantida Qaranka looga boobo iyo cid meel loogu cidhiidhyo,Dekedduna waa mug weyn cil walba qaada.
karin xamaal December 22, 2011 at 6:03 PM
Dawladii Ruushka ayaa 77kii lagu yidhi waar ma Somali baa waxaa ku abaal guday,markaasuu ugu jawaabay nin ii raara ayaan kaga imi uu uga jeeday AK47,
hadda Cali waxaan kaga gamayaa Ninka dawladda meesha u fadhiya,walee sidii hore looma liqliqo.
Libaax Laalays December 22, 2011 at 6:33 PM
Waxani wax ka badane,ma mashruuc EXTANTION ah ayaa jira sida Airportka,oo Dekedda lagu balaadhinayo,waayo xirfaddaa wax kala basrinta Cali baa yaqaana,sidii kii UNDP ee Dekedda lagu dayac tiray,Axmed hawshaas wuu ku danbeeyaa waana waxa galaaftay iyo 3 Dollar ee shaqaaluhu…………..